Trano manodidina ny 405 no kila hotohoton’ny afo tamin’io ary olona 2300 no traboina. Mbola miandry ny tsirambin’ny tanana avy amin’ny fitondram-panjakana mahefa sy ny fanampiana amin’ny loza voajanahary avy amin’ny Bngrc ireo vahoaka traboina any an-toerana. Ny zava-misy, tamin’ity herinandro ity vao tonga tao Mahajanga ireo fanampiana avy amin’ny Bngrc. Niangaviana ny orinasa Aqualma any an-toerana hitatitra an-tsambo ny entana mankany Besalampy. Avy eo vao hotaterina an-tsarety mankany Bekoboka, 98 km miala an’i Besalampy. Izany no voin-kava-mahatratra misy eto amin’ny firenena ankehitriny.